Lifestyle Archives - Khit Thit Media
အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အသက္ ၃၀ ေက်ာ္လာတာနဲ႔ တျဖည္းျဖည္း မ်က္ႏွာေပၚမွာ အေရးေၾကာင္းေတြ ေပၚလာတာ၊ အေရျပားေတြ တြန္႔လာတာအျပင္ …
” အပ်ိဳႀကီး ျဖစ္နိုင္ေခ် တြက္နည္း ” (၁) အ႐ြယ္ေရာက္ေနၿပီ ျဖစ္ေသာ္လဲ ခုခ်ိန္ထိ ခ်စ္သူ …
လူတစ္ေယာက္နွစ္လိုဖြယ္ရွိတယ္၊ ဆြဲေဆာင္မႈရွိတယ္၊ ညိႈ႕ဓာတ္ရွိတယ္ဆိုတာ ေမြးရာပါလို႕ထင္ၾကျပီး ကိုယ္တိုင္ကေတာ့သူ႕လိုမျဖစ္္နိုင္ဘူးလို႕ ေတြးမိတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲ့လိုျဖစ္လာေအာင္ဖန္တီးယူလို႕၊ လုပ္ယူလို႕ရပါတယ္။ သင့္ကိုဆြဲေဆာင္မႈရွိေစနိုင္မယ့္အခ်က္ေတြထဲမွာ …
အခုထိမစြံေသးဘူးလားလို႔ ေမးတတ္သူေတြကို တံု႔ျပန္ဖို႔အေကာင္းဆံုးစကားလံုးမ်ား
ဘာေၾကာင့္ ဆင္ဂယ္ျဖစ္ေနတာလဲ၊ ဘယ္သူနဲ႕မွ မဒိတ္ေတာ့ဘူးလား၊ ဘယ္ေတာ့စြံမွာလဲ စသျဖင့္ ေမးခံရတဲ့ ဆင္ဂယ္ေလးေတြ ရွိၾကလား။ လူေတြက …
အသက် ၃၀ ကျော်မှ လက်မထပ်ဘူးဆိုရင် အပျိုကြီးစာရင်းထဲဝင်နေပါပြီ။ အဲ့မတိုင်ခင်မှာ အပျိုကြီးဖြစ်တော့မယ့် အခြေအနေ လက္ခဏာတွေဖြစ်နေမှာပါ။ အပျိုကြီးဖြစ်တော့မယ့် …
ခ်စ္သူကို စႏိုက္ေၾကာ္မလက္ထဲ မပါေစခ်င္ရင္ အစကတည္းက ဒီလိုလုပ္ထားပါ….
ခုခေတ်မှာ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း စနိုက်ကြော်မတွေရဲ့ရန်ကို ချစ်သူရှိတဲ့မိန်းကလေးတွေတိုင်းက စိတ်ပူနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တကယ်ချစ်လို့ တွဲတဲ့ချစ်သူကို သူများလက်ထဲပါမသွားစေချင်တာတော့ မိန်းကလေးအားလုံးရဲ့ အတ္တပါ။ …
လူတစ်ယောက် ပြုံးနေတိုင်း ပျော်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အပြုံးတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ စိတ်ဒဏ်ရာတွေအပြည့်ရှိနေတတ်တယ်။ အဲ့စိတ်ဒဏ်ရာတွေ တခြားသူတွေမမြင်ရအောင် အပြုံးနဲ့ဖုံးကွယ်ထားတာပါ။ အဲ့လိုနူတ်ခမ်းက ပြုံးနေပေမယ့် …
ဒီမှာကျွန်တော်ရည်ညွှန်းချင်တဲ့ ရည်စားများတယ်ဆိုတာ တစ်ယောက်နဲ့တွဲနေတုန်းတစ်ယောက်ထပ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ (ဒါကဖောက်ပြန်တာ စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ ညံ့ဖျင်းသိမ်ငယ်တာမျိုး) ဖြစ်သွားပါပြီ။ ဆိုလိုချင်တဲ့ရည်းစားများတယ်ဆိုတာ တစ်သတ်မှာတစ်ယောက်တည်းချစ်ပြီးအဲ့တစ်ယောက်နဲ့ပဲလက်ထက်လိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲ လူမမြဲတာမျိုးပါ။ …
နေရာတိုင်းအတွဲတိုင်းကြည့်လိုက်ရင် တော်တော်များများရန်မဖြစ်ပဲအမြဲအေးအေးလူလူဖြစ်နေတဲ့အတွဲဆိုတာရှားမှရှားပါပဲ။ ထူးတော့ထူးဆန်းသားချစ်လို့ တွဲကြပင်မဲ့ ဘာလို့ရန်ခဏခဏဖြစ်ကြတာလဲပေါ့…ရန်ဖြစ်လို့မချစ်ဘူးလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူး ချစ်ချက်ပဲ…ဒါပင်မဲ့ရန်ဖြစ်ကလည်းမပျက်ဘူး။ဆိုတော့ သမီးရည်းစားတွေချစ်လျက်နဲ့ဘာအကြောင်းတွေကြောင့်ခဏခဏရန်ဖြစ်ကြတာလဲဆိုတာ…. (၁) သဝန်တိုလို့ရန်ဖြစ်တယ် သေချာပါတယ် …
ရေစက်ဆိုတဲ့စကားကိုလူတော်တော်များများကနေရာတကာမှာသုံးတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တွေ့ဆုံတာဟာရေစက်ပဲ၊ ဒီတစ်ယောက်နဲ့မတော်တဆခင်သွားတာလည်းရေစက်ပဲ ခင်ပြီးမခင်တော့တာလည်းရေစက်ဖြစ်သလို ချစ်ပြီးပြတ်သွားတာလည်းရေစက်လို့ပဲပြောတတ်ကြပါတယ်။ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ဒါမျိုးဟာရေစက်လို့ပြောရင် မှန်ပါတယ်။ ဒါပင်မဲ့တွေ့ဆုံမှုတိုင်းဟာပျော်ရဖို့ကြီးဖြစ်လာတဲ့ရေစက်မျိုး ဆုံရဖို့ကြီးဖြစ်လာတဲ့ရေစက်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ …